Manatsara ny fifandraisana amin'i Wizz Air ny seranam-piaramanidina Budapest
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Manatsara ny fifandraisana amin'i Wizz Air ny seranam-piaramanidina Budapest
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Okraina • Vaovao isan-karazany
Manantena mialoha ny taona 2020, nanambara ny fanatsarana ny tamba-jotra misy azy ny seranam-piaramanidina Budapest miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka fiaramanidina monina ao an-trano, Wizz Air. Hanomboka hanomboka amin'ny fahavaratra manaraka, ny serivisy Hong Kong ambany-vidiny (LCC) dia hiasa amin'ny serivisy isan'andro any Bruxelles, ary rohy vaovao indroa isan-kerinandro mankany Lviv sy Kharkiv any Okraina.
Amin'ny alàlan'ny fanamafisana tanteraka ny fifandraisan'i Hongria amin'ny renivohitr'i Belzika, ny Wizz Air dia nahazo ampahany 26% avy hatrany amin'ny sidina isan-kerinandro eo anelanelan'ny tanàna roa. Rehefa manatevin-daharana ny serivisy efa misy eo amin'ny zotra ny LCC, ny fanampiana ireo sidina vaovao mandritra ny S20 dia hahita ny tolotra Budapest manakaiky ny seza 150,000 XNUMX any Bruxelles amin'ny fahavaratra manaraka.
Mampitombo ny fifandraisana amin'i Okraina, ary tsy misy fifaninanana mivantana amin'ny rohy roa, hanampy ny fifandraisana fahaefatra sy fahadimy an'i Budapest amin'ny firenena Eoropeana Atsinanana ny Wizz Air. Rehefa miditra ao amin'ny rohy efa misy any Kiev sy Odesa (hanombohana amin'ny volana novambra) ny serivisy mankany Lviv sy Kharkiv, dia hanolotra sidina 15 isan-kerinandro mankany Ukraine ny mpitatitra.
"Ny fanamafisan'i Wizz Air ny rohy hafa mankany Okraina dia hahita an'i Budapest manolotra fiasa 22 isan-kerinandro ho an'ny firenena mitombo any Eropa Atsinanana ny mpanjifany," hoy i Balázs Bogáts, Lehiben'ny fampandrosoana Airline, seranam-piaramanidina Budapest. "Ity fanambarana farany ity dia hahita ny mpiara-miombon'antoka akaiky eto amintsika hanolotra mpivady tanàna 71 amin'ny fahavaratra ho avy izao, ary rehefa fantatry ny kaompaniam-pitaterana ny fangatahana fahaiza-manao bebe kokoa amin'ny serivisinay ho any Bruxelles, dia manantena izahay ny hanohy ny fiaraha-miombon'antoka mitombo miaraka amin'ity mpitatitra mavitrika ity," hoy hatrany i Bogáts .